Dhammaan dadka 12 sano jir buuxiyey waxa loo soo bandhigayaa tallaal. Carruurta qaar marka laga soo blaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa.
Dadka buuxiyey 12 sano ama ka weyn waxa la siinayaa tallaalka ka hortaga cudurka covid-19
Hadaad adigu gaartay 12 sano ama aad ka weyn tahay waxaad ballansan kartaa tallaalka ka hortagga cudurka covid-19. Tallaalku waa lacag la'aan waana ikhtiyaari. Haddii aanad weli gaarin 18 sano waxaad u baahan tahay inay dadka kaa mas'uulka ahi ay saxiixaan foom oggolaanshaha ah.
Sidee ayaan anigu u qabsadaa wakhtiga ballanta?
Gal bogga ballanta laga qabsado oo dooro meesha aad rabto in lagugu tallaalo.
Guji leenka (länken) goobta tallaalka ee aad dooratay.
Waxaad soo geleysaa bogga ballan qabsashada oo ku qoran luqadda Iswiidhishka. Halkaas ayaad tallaalka ka ballansan kartaa.
Waxa kale oo aad ballan ka samaysan kartaa adiga oo wacaya goobta tallaalka ee aad dooratay. Saacadaha telefoonka ayaa laga yaabaa inay xaddidan yihiin.
Macluumaadka bogagga kala duwan ee ballan qabsashadu waxay ku qoran yihiin luqadda iswiidhishka. Weydii qof yaqaana iswiidhishka si uu kaaga caawiyo ballan qabsashada.
Miyaad u baahan tahay in lagaa caawiyo si aad ballan u qabsato?
Waxaad sidoo kale annaga naga soo wici kartaa 0470-58 60 00 si lagaaga caawiyo ballan qabsahsada.
Wac 0470-58 60 00. Wac lambarka adiga oo ku hadlaya iswiidhish ama Ingiriis.
Sheeg lambarka telefoonkaaga oo ku sheeg halkaa haddii aad u baahan tahay turjumaan.
Waxaan adiga ku soo wici doonaa toddobaad gudihii.
Dib uma dhigikarno ballamaha mana kaj awaabi karno su'aalaha caafimaadka ku saabsan.
Ka sii fikir wakhtiga ballanta ka hor intaan la gaarin
Haddaad adigu gaartay 12 sano laakiin aanad weli buuxin 18 sano waxaad u baahan tahay inay dadka kaa mas’uulka ahi buuxiyaan foomka oggolaanshaha si adiga laguu tallaalo. Foomka waxaa la socda warqad warbixin ah oo loogu talagalay dhammaan qoysaska leh dhallinyarada da'doodu tahay 12-18. Labada mas'uulba waxay u baahan yihiin inay siiyaan oggolaanshahooda si ay u saxiixaan foomka oggolaanshaha. Haddii uu ilmuhu leeyahay hal mas’uul oo keliya hal saxeex ayaa ku filan.
Foomka oo ay la socoto warqadda caddaynta caafimaadka ee loo wada diray guryaha dhammaan waxa la keenayaa maalinta tallaalka.
Foomka oggolaanshaha oo la soo qorayo (ingiriis iyo iswiidhish), pdf, dariishad cusub ayaa kuu furmaysa
Haddii aad rabto in lagu tallaalo adiga oo aan oggolaansho ka haysan qofka mas'uulka ah waa laga yaabaa in mararka qaarkood laguu oggolaado inaad sidaas samayso. Rugta qaabbilaada dhalliyarada ee Gobolka Kronoberg ayaa qiimeyn ku samaynaysa haddii aad adigu tahay qof u bisil go'aankaas. Waa inaad jirtaa 15 sano si loo sameeyo qiimeynta qaangaarka. Kulanku waa mid dhigitaal ah wuxuuna qaadanayaa ilaa 10 daqiiqo. Waxaad ballan u qabsan kartaa si qiimeynta qaangaarka adiga laguugu sameeyo adiga oo la xiriiraya rugta qaabbilaad dhalinyarada. Waxaad wici kartaa ama ballan ayaad ka qabsan kartaa appka Daryeelkayga Kronoberg oo aad ka heli karto halkan (Bank id ama Freja e-id plus ayaa loo baahan yahay)
Rugta qaabbilaada dhalinyarada ee Växjö, bogga luqadda iswiidhishka, lambarka telefoonka 0470-58 69 79
Rugta qaabbilaada dhalinyarada ee Ljungby, bogga luqadda iswiidhishka lambarka telefoonka 0372-58 58 41
Haddii aad qabto xasaasiyad xun, markaa websaydka ballan kama qabsankartid. Taa beddelkeeda waxaad la xiriiraysaa rugtaada daryeelka caafimaadka si aad talo uga hesho meesha lagugu tallaalayo. Waxaa muhiim ah in aad hesho ilaalin sax ah oo la xiriira tallaalka.
Tallaalka 2aad waxaa la qaataa afar ilaa shan toddobaad kadib tallaalka 1aad. Wakhtiga tallaalka 2aad waxa la ballansanayaa marka la qaadanayo tallaalka koowaad.
­­Haddii aad dhibaato kala kulanto ballan qabsashada, waa inaad la xiriirtaa cidda markaa ku tallaalaysa. Macluumaadka lagala xiriirayo waxaad ka heli kartaa boggag kala duwan oo ballamaha laga qabsankaro. Haddii aad qabtid su'aalo guud oo ku saabsan covid-19 iyo tallaalka, wac 113 13. Wixii su'aalo caafimaad ah, wac 1177.
Tallaalka ku dhammaystirka/buuxinta ee ka hortaga cudurka covid-19
Qofka ay da’diisu tahay 18 jir ama ka weyn waxa uu ballan ka qabsan karaa si loogu dhammaystiro/buuxiyo tallaalka marka ay ugu yaraan shan bilood ka soo wareegto markii uu qofku qaadatay tallaalkiisii labaad.
Ballan ka qabso mid ka mid ah goobaha tallaalada
Haddii aad u baahan tahay caawimo si ballan laguugu qabto tallaalka, waxaad wici kartaa 0470-58 60 00.
Soo ogow goorta aad qaadatay tallaalkii 2aad
Goobta tallaalka, waa inaad tustaa/muujisaa markaad qaadatay tallaalkii labaad. Waxaad ku ogaan kartaa adiga oo:
Gala boggaa qoraalka caafimaadkaaga lagu qoro ee 1177.se
Ka dalbo caddaynta cudurka covid bogga covidbevis.se
Wac lambarka 0470-58 60 00
Dadka ku jira kooxda khatarta waxa lagu tallaalayaa xarunta caafimaadka
Qofka ka tirsan kooxda khatarta ee dhinaca caafimaadka waxa lagu tallaalaa xarunta caafimaadka, halkaas oo ay shaqaaluhu ka arki karaan tallaalka uu qofku hore u qaadatay. La xidhiidh xaruntaada caafimaadka si aad ballan u qabsato.
Qofka unugyada difaaca jidhkiisu aad u dhacsan yihiin ayaa doos dheeraad ah oo tallaalka u baahan kara. Dhakhtarkaaga ayaa go’aaminaaya haddii aad taas u baahan tahay.
Carruurta ayaa Covid-19 aad ugu xanuunsan karta, inkastoo aanay taasi wax caadi ah aheyn. Carruurta da'doodu tahay 12 sano jir iyo wixii ka weyn ayaa sidaas darteed tallaalka loo soo bandhigayaa. Carruurta qaar marka laga soo bilaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa cudur xun oo sanbabada ah. Dhakhtarkaaga ilmaha daaweynaaya kala hadal wixii idinka idin khuseeya.
Carruur badan oo adduunka ku kala nool ayaa covid-19 laga tallaalay.